RØDE na-ewepụta Podcast Production Studio! | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 11, 2018 Tọzdee, Disemba 11, 2018 Douglas Karr
Otu ihe m na-agaghị ekere òkè na nke a post bụ ego na oge na m ji na-azụ, eleru, na ule ngwá m pọdkastị. Si a igwekota na studio, na kọmpat studio na m nwere ike na-ebu na a azu paaki, ruo USB microphones m nwere ike dee site na laptọọpụ ma ọ bụ iPhone… M na-agbalị ha niile.
Nsogbu nke oge a abụwo njikọta nke ụlọ-studio na ndị ọbịa dịpụrụ adịpụ. Ọ bụ ụdị okwu a na m kpọtụrụ ụfọdụ ndị nrụpụta ka m mara ma m nwere ike ịme mmadụ ka ọ wulite ihe ngosi.
Ọ bụghị nsogbu dị mgbagwoju anya, mana ọ chọrọ ụfọdụ ngwaike na-agbanwe agbanwe. Mgbe ị nwere ọtụtụ ndị ọbịa na mgbakwunye na onye ọbịa dị anya, njedebe nke onye ọbịa dịpụrụ adịpụ ga-eme mkpọtụ nke olu ha na isi ha. Yabụ, ị ga-emepụta bọs na-ahapụ olu onye ọbịa dịpụrụ adịpụ na nloghachi laghachikwuru ha. A maara nke a dị ka mix-mwepu.
Mana enweghị m ike ịdọnye igwekota ihe mmemme na ụzọ na mgbakwunye na akụrụngwa niile, yabụ achọpụtara m otu esi emepụta otu nhazi ahụ. eji a virtual ụgbọ ala na m MacBook Pro. Ma ọ ka bụ ihe mgbu na butt na ntọlite.
Ihe niile gbanwere.
Ugbu a, onye ọ bụla nwere nrọ iji mepụta pọdkastị ndị ọkachamara ga-enwe ike ịme nke a nke ọma na ikpo okwu ọhụrụ a ma dị ike. Nke a bụ ụzọ ọhụụ dị ịrịba ama maka RØDE: otu ihe ntanetị n'ime otu maka ndị pọdkastị nke ọkwa ọ bụla.
Anọ m na-eleta onye na-ese foto m taa, Ablog Cinema, ọ ga-ajụkwa ma m ga-ahụ ihe ọhụrụ RØDECaster Pro - Podcast Production Studio. Nke a bụ nkọwa.
Ma chere… e nwere ihe. Nke a bụ nkọwa zuru ezu:
Ndi RØDE chere echiche banyere ihe niile? Ihe ndị dị n'ime ya gụnyere:
4 ọwa igwe okwu: Klaasị A, ntinye ngwa ngwa nke nwere ike iji ike igwe igwe igwe condenser yana igwe okwu ike dị egwu.
Ihe ntinye iche maka 3.5mm TRRS (ekwentị ma ọ bụ ngwaọrụ), Bluetooth (ekwentị ma ọ bụ ngwaọrụ) na USB (maka egwu / odiyo ma ọ bụ ngwa oku)
Ekwentị na ngwa oku - na - enweghị mgbagha (mwepu-mwepu). Gbanwee ọkwa dị mfe - enweghị mgbakwunye ma ọ bụ ihe ndozi dị egwu.
Mbadamba ụda olu mmemme mmemme: Agba agba nwere ụda ụda dị iche iche na-akpalite maka jingles programmable na nsonaazụ ụda.
Mmemme na RØDECaster ™ Pro ma ọ bụ site na kọmputa gị site na ngwanrọ ahụ.
APHEX® Ọiterụ ™ na Big Bottom ™patented nhazi maka ọgaranya ahụ, ụda olu dị na sistemụ mgbasa ozi ọkachamara. Gụnyere ihe omimi dị iche iche: mkpakọ, ịmachi na mkpọtụ mkpọtụ.
Ihuenyo mmetụ aka na-enye ohere nchịkwa dị mfe nke ntọala niile, gụnyere nhazi nrụpụta maka ọtụtụ ọrụ ọkachamara.
Ngosiputa isi okwu igwe okwu ano na igwe okwu, nke ọ bụla nwere njikwa nnwere onwe ya.
Ihe ndekọ na-eduga na Kaadị microSD maka arụ ọrụ onwe gị kpamkpam, ma ọ bụ iji kọmputa na ngwanrọ kachasị amasị gị site na USB.
Ndụ gụgharia ikike.Nke redio ugbu a!
Nke a bụ ihe dị ịtụnanya! Inwe usoro ọwa enwere ike ịnye m ga-enyere m aka ịwebata usoro m, mpụga, na mgbasa ozi na ọsọ ka m wee nwee ike ịdekọ ma bulite na nnabata m.
Gịnị Banyere Live Video?
Uru ọzọ nke ngalaba a bụ ikike ijikọ ya na sistemụ dịka Ihe nkiri Studio. Ngwa stereo nwere ike ịnya ụda na ngwaọrụ ejikọrọ na ị nwere ike ịgbanwee azụ na azụ n'etiti iPads na ọbịa gị site na iPhone FaceTime ma ọ bụ oku Skype!
Enweela m njem n'afọ ọzọ ịdekọ ihe ọzọ Pọdkastị ndị na-enye ìhè na Dell… Ma otu a ga-eso m. Unitlọ ọrụ ahụ karịrị naanị 6 pound ka ọ gaghị adị oke njọ ịghagharị. Tinye na igwe okwu, eriri, na ekweisi ma enwere m ike ị nweta ihe nwere wiil, mana ọ dị mma.
Ọ bụrụ na m nwere otu mkpesa ọ ga-abụ na unit agaghị multi-track ndekọ. Yabụ, ọ bụrụ na onye ọbịa akpọọ ụkwara mgbe onye ọbịa ọzọ na-ekwu okwu… ị rapaara na ya ma ọ bụ ịkwesịrị ịkwụsị ihe ngosi ahụ ma degharịa ngalaba ahụ, wee kpokọta ngalaba ahụ ọnụ na mmepụta post. Ka anyị nwee olile anya na ụdị ọdịniihu ga - eme ka ịdekọ ọtụtụ ihe site na kaadị micro-SD na ntinye USB.
Zụọ ahịa maka RØDECaster Pro na Sweetwater
Tags: Mobile na Mbadamba ụrọPodcast studioacha uhie uhieRDECastereririeriri-c